Nne na Nna na Ụmụ Ha Ikwurịta Okwu | Ihe Ndị Na-eme Ka E Nwee Obi Ụtọ n’Ezinụlọ
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Finnish French Georgian German Greek Greenlandic Gun Haitian Creole Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malagasy Norwegian Polish Portuguese Romanian Sepedi Serbian Sesotho (Lesotho) Setswana Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Swedish Tagalog Telugu Tiv Tsonga Turkish Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
“Na mbụ, mụ na nwa m nwoke na-ekwurịta okwu nke ọma. Ma, ugbu a ọ dị afọ iri na isii, ọ na-esiri mụ na di m ike ịma ihe dị ya n’obi. Ọ na-anọ naanị ya n’ime ụlọ ya, ọ na-esikwa ike tupu ya atụpụrụ anyị ọnụ!”—MIRIAM, MEXICO.
“O nwere mgbe ọ na-amasị ụmụ m nke ukwuu ka m kọwara ha akụkọ. Ha na-egekwa m ntị! Ma, ugbu a ha bụ okorobịa na agbọghọbịa, ha na-eche na amaghị m nke a na-akọ.”—SCOTT, AUSTRALIA.
Ọ BỤRỤ na nwa gị ka na-eto eto, ị ga-aghọta otú obi dị nwoke na nwaanyị a e dere ihe ha kwuru n’elu. N’oge gara aga, mkparịta ụka gị na nwa gị nwere ike na-aga were were dị ka ụgbọala si aga n’okporo ụzọ awara awara. Ugbu a, o yiri ka ụzọ ahụ akpọchiela. Otu nwaanyị Italy aha ya bụ Angela kwuru, sị: “Mgbe nwa m nwoke dị obere, ọ na-ajụ m ọtụtụ ajụjụ. Ma, ugbu a ọ bụ m na-amalite mkparịta ụka mụ na ya. Ọ bụrụ na m emeghị otú ahụ, anyị nwere ike ịnọ ọtụtụ ụbọchị n’akparịtaghị ezigbo ụka.”
Dị ka Angela chọpụtara, ikekwe ị chọpụtala na nwa gị ọ na-anaghị esiri ike ikwu okwu mgbe ọ bụ nwata, bụzi nwa agbọghọ ma ọ bụ nwa okorobịa na-anaghị atụpụrụ mmadụ ọnụ. O nweghị ezigbo ihe ọ na-ekwu n’agbanyeghị mgbalị niile ị na-eme ka gị na ya kparịta ụka. Ọ bụrụ na ị jụọ nwa gị nwoke, sị, “Olee otú ihe si gaa taa?” Ya azaa gị ngwa ngwa, sị, “Ọ dị mma.” Ọ bụrụ na ị jụọ nwa gị nwaanyị, sị, “Gịnị mere n’ụlọ akwụkwọ unu taa?” Ya adụọ n’ubu, sị, “O nweghị.” Ọ bụrụ na ị nwaa anwaa chọọ ka o kwutụkwuo okwu wee sị ya, “kọọrọnụ m ihe merenụ,” ọ gaghịzi atụpụrụ gị ọnụ.
O doro anya na ọ naghị esiri ụfọdụ ndị na-eto eto ike ịgwa ndị mụrụ ha okwu. Ma, ihe ha na-ekwu abụghị ihe ndị mụrụ ha chọrọ ịnụ. Otu nwaanyị onye Nigeria nke aha ya bụ Edna kwuru, sị: “Mgbe ọ bụla m gwara nwa m nwaanyị ihe ọ ga-eme, ihe ọ na-ekwukarị bụ, ‘Hapụ m aka.’” Ramón, onye Mexico, kwuru ihe yiri nke ahụ banyere nwa ya nwoke nke dị afọ iri na isii. Ọ sịrị: “Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị niile ka mụ na ya na-ese okwu. Mgbe ọ bụla m gwara ya ihe ọ ga-eme, ọ na-agwa m ihe mere ọ na-agaghị eji mee ya.”
Ike nwere ike ịgwụ nne ma ọ bụ nna nke na-agbalị ka ya na nwa ya na-akparịta ụka nke ọma, ma ọ bụrụ na nwa ahụ anaghị atụpụrụ ya ọnụ. Baịbụl kwuru na “atụmatụ na-aghasasị ma ọ bụrụ na a gbaghị izu.” (Ilu 15:22) Otu nwaanyị Russia nke aha ya bụ Anna, onye naanị ya na-azụ ụmụ ya, kwuru, sị: “Ọ bụrụ na amaghị m ihe dị nwa m nwoke n’obi, iwe na-ewe m nke na ọ na-adị m ka mụ baara ya mba.” Gịnị mere o ji adị ka ndị mụrụ ụmụ na ụmụ ha na-eto eto hà na-akwụsị ikwurịta okwu nke ọma mgbe ikwurịta okwu kacha dịrị mkpa?
Ịmata Ihe Na-egbochi Ezi Nkwurịta Okwu
Ikwurịta okwu nke ọma abụghị naanị mmadụ ịtụpụrụ mmadụ ibe ya ọnụ. Jizọs sịrị na ‘ọ bụ ihe jupụtara mmadụ n’obi ka ọnụ ya na-ekwu.’ (Luk 6:45) Ya mere, ezi nkwurịta okwu na-eme ka anyị mụta ihe n’aka ndị ọzọ, na-emekwa ka ndị ọzọ mata ihe ụfọdụ banyere anyị. Ọ na-esiri ndị na-eto eto ike ikwe ka ndị ọzọ mara ihe ụfọdụ banyere ha, n’ihi na nwatakịrị ọ na-anaghị esiri ike ikwu okwu nwere ike ghọọ onye na-anaghị atụpụrụ mmadụ ọnụ ozugbo ọ malitere ito. Ndị ọkachamara na-ekwu na ndị na-eto eto na-echekarị na ndị mmadụ na-ekiri ha ma na-ahụ ihe niile ha na-eme. Kama ikwe ka a na-ahụ ihe niile ha na-eme, ndị na-eto eto ndị ihere na-eme nwere ike ịnọrọ onwe ha ma zochiere ndị mụrụ ha ihe ha na-eme.
Ihe ọzọ nwere ike igbochi ezi nkwurịta okwu bụ na ọ na-amasị ndị na-eto eto inwere onwe ha. Nke bụ́ eziokwu bụ na nwa gị ka na-eto eto, otu n’ime ihe na-egosi na ọ ka na-eto eto bụ na ọ ga na-achọ ịnọrọ onwe ya. Ma, nke a apụtaghị na nwa gị na-eto eto eruola ibiri onwe ya. N’ọtụtụ ụzọ, enyemaka gị dị ya mkpa ugbu a karịa mgbe ọ bụla ọzọ. Ma, ọtụtụ afọ tupu ya ebiri onwe ya, ọ na-eji nwayọọ nwayọọ malite inwere onwe ya. Ọ na-amasị ọtụtụ ndị na-eto eto ibu ụzọ chee ihe ha chọrọ ime echee tupu ha emee ka ndị ọzọ mara ya. Nke a bụ otu n’ime ihe na-egosi na ha amalitela ito.
Ma, ndị na-eto eto anaghị ezoro ndị ọgbọ ha ihe dị ha n’obi. Otu nwaanyị Mexico nke aha ya bụ Jessica chọpụtara na nke a bụ eziokwu. Ọ sịrị: “Mgbe nwa m nwaanyị bụ nwa, ọ na-abịakwute m mgbe ọ bụla o nwere nsogbu. Ma ugbu a, ọ na-agakwuruzi ndị enyi ya.” Ọ bụrụ na nwa gị na-eto eto na-eme otú ahụ, echela na ọ jụla gị. Otú ọ dị, nnyocha ndị e merela na-egosi na ọ bụrụgodị na ndị na-eto eto ekwetaghị na ndụmọdụ ndị mụrụ ha ka mma, ha na-eji ya akpọrọ ihe karịa ndụmọdụ ndị enyi ha. Ma, olee ihe ị ga-eme ka gị na nwa gị na-eto eto nọgide na-ekwurịta okwu nke ọma?
Aro Ndị Nne na Nna Tụrụ
“Ahụ́ na-eru nwa m nwoke ala ikwu okwu ma anyị na ndị ọzọ nọrọ. Ya mere, naanị mụ na ya nọrọ, m na-amalite ihe ahụ anyị na ndị ahụ nọ na-ekwu.”—ANGELA, ITALY.
“Anyị achọpụtala na anyị na ụmụ anyị na-ekwurịta okwu nke ọma ma ọ bụrụ na anyị eburu ụzọ jaa ha mma ma gwa ha na anyị hụrụ ha n’anya nke ukwuu.”—DONIZETE, BRAZIL.
“M jụrụ ndị merela okenye, bụ́ ndị e ji iwu Baịbụl zụlite, otú ndụ ha dị mgbe ha na-eto eto nakwa otú ndị mụrụ ha si nyere ha aka. Ihe ndị ha zara m nyeere m aka.”—DAWN, BRITAIN.
Wepụ Ihe Mgbochi Ahụ, Iji Nwee Ihe Ịga nke Ọma
Ka e were ya na ị nya ụgbọala na-aga n’okporo ụzọ awara awara dị anya, nke na-agbagọghị agbagọ. Ị gbaala ọtụtụ kilomita, ma, ọ bụ naanị ugboro ole na ole ka ị hịgharịtụrụ ihu ụgbọala gị. Na mberede, gị erute n’ebe ụzọ ahụ gbagọrọ agbagọ. Ị ghaghị ịhịgharị ihu ụgbọala gị ka o wee ghara ịmaba n’ọhịa. Ọ bụ otú a ka ọ dị nwa gị mgbe ọ malitere ito. O nwere ike ịbụ na gị na nwa gị na-ekwurịta okwu nke ọma kemgbe ọtụtụ afọ. Ma, ka ọ dị ugbu a, ndụ nwa gị agbanweela nke ukwuu, ị ghaghị ‘ịhịgharị ya ihu ka ọ ghara ịmaba n’ọhịa’ site n’ịgbanwe otú gị na ya si ekwurịta okwu. Jụọ onwe gị ajụjụ ndị a.
‘Mgbe nwa m nwoke ma ọ bụ nwa m nwaanyị chọrọ ka mụ na ya kwuo okwu, m na-enwe mmasị mgbe ahụ?’ Baịbụl kwuru, sị: “Dị ka mkpụrụ osisi apụl ọlaedo nke dị n’ime ihe e ji ọlaọcha tụọ, otú ahụ ka okwu e kwuru n’oge kwesịrị ya dị.” (Ilu 25:11) Amaokwu a mere ka o doo anya na ime ihe n’oge kwesịrị ekwesị dị oké mkpa. Dị ka ihe atụ: Onye ọrụ ubi enweghị ike ime ka oge iwe ihe ubi bịa ngwa ngwa tupu oge ya, o nweghịkwa ike ime ka ọ ghara ịbịa mgbe oge ya ruru. Naanị ihe ọ ga-eme bụ iwe ihe ubi ya mgbe oge ya ruru. Nwa gị na-eto eto nwere ike inwe oge na-amasị ya ikwu okwu. Ekwela ka oge ahụ gafenahụ gị. Otu nwaanyị Australia naanị ya na-azụ ụmụ ya, onye aha ya bụ Frances, kwuru, sị: “Ọtụtụ mgbe, nwa m nwaanyị na-abata n’ụlọ m n’abalị, ọ na-anọru otu awa mgbe ụfọdụ. Ọ naghị amasị m ịmụ anya n’abalị, ya mere, ọ naghị adịrị m mfe. N’agbanyeghị nke ahụ, anyị na-ekwu ọtụtụ ihe n’ime abalị ndị ahụ.”
LEE MA Ị̀ GA-EME IHE A: Ọ bụrụ na nwa gị na-eto eto achọghị ka gị na ya kwurịta okwu, gị na ya mekọọ ihe ọnụ—gị na ya soro gagharịa, bugharịa ya n’ụgbọala, gị na ya zụọ okwe, ma ọ bụ rụkọọ ọrụ dị n’ụlọ ọnụ. Ọtụtụ mgbe, imekọ ihe ọnụ otú a na-eme ka ndị na-eto eto nwekwuo mmasị ikwu okwu.
‘M̀ na-esi n’ihe ọ na-ekwu na-aghọta otú obi dị ya?’ Job 12:11 kwuru, sị: “Ntị ọ̀ dịghị anwale okwu dị ka okpo ọnụ si anụ ụtọ ihe oriri?” Karịa mgbe ọ bụla ọzọ, ọ bụ ugbu a ka i kwesịrị ‘ịnwale’ ihe nwa gị nwoke ma ọ bụ nwa gị nwaanyị na-ekwu. Ndị na-eto eto na-ekwukarị okwu dị ka à ga-asị na ihe ha na-ekwu bụ eziokwu. Dị ka ihe atụ, nwa gị nwoke ma ọ bụ nwa gị nwaanyị nwere ike ịsị, “Ị na-emekarị m ka m̀ bụ nwata!” ma ọ bụ “Ọ dịghị mgbe ị na-ege ntị n’ihe m na-ekwu!” Kama gị na ya ịrụwa ụka n’ihe ahụ ọ na-ekwetaghị, ghọta na ikekwe otú ahụ o si kwuo ya abụchaghị otú ọ dị ya n’obi. Dị ka ihe atụ, “Ị na-emekarị m ka m̀ bụ nwata” nwere ike ịbụ “Ọ dị m ka ị tụkwasịghị m obi.” “Ọ dịghị mgbe ị na-ege ntị n’ihe m na-ekwu” nwere ike ịbụ “M chọrọ ịgwa gị otú obi dị m.” Gbaa mbọ ka i si n’ihe ọ na-ekwu ghọta otú obi dị ya.
LEE MA Ị̀ GA-EME IHE A: Ọ bụrụ na nwa gị na-eto eto ekwuo okwu na-egosi na iwe ji ya, i nwere ike ịgwa ya, sị: “M chọpụtara na iwe ji gị, gwa m ihe na-ewe gị iwe. Gwa m ihe mere i ji kwuo na m na-eme gị ka ị̀ bụ nwata.” Mgbe ahụ gee ya ntị, anapụkwala ya okwu n’ọnụ.
‘Mgbe m na-amanye nwa m ka o kwuo okwu, ọ̀ ga-abụ na m na-emebi mkparịta ụka mụ na ya n’amaghị ama?’ Baịbụl kwuru, sị: ‘A na-agha mkpụrụ nke ezi omume n’ebe udo dị maka ndị na-eme udo.’ (Jems 3:18) Jiri okwu ọnụ gị na omume gị mee ka “udo” dịrị, ka obi wee ruo nwa gị na-eto eto ala ikwu okwu. Cheta na ị dị ka ọkàiwu na-ekpechitere nwa gị ọnụ ya. Mgbe gị na ya na-ekwu okwu, agwala ya okwu dị ka à ga-asị na ị bụ ọkàiwu na-ekpechite ọnụ onye ya na ya nwere okwu n’ụlọikpe. Otu nna bụ́ onye Korea nke aha ya bụ Ahn kwuru, sị: “Nne ma ọ bụ nna maara ihe anaghị asị nwa ya, ‘Olee mgbe ị ga-akwụsị ime ka nwata?’ ma ọ bụ, ‘Ugboro ole ka m gwarala gị ihe a,’ ma ọ bụ ihe yiri ihe ndị a. Mgbe m gwara ụmụ m ụdị okwu a ọtụtụ ugboro, m chọpụtara na otú m si gwa ha ya na ihe m gwara ha were ha iwe.”
LEE MA Ị̀ GA-EME IHE A: Ọ bụrụ na nwa gị na-eto eto atụpụrụghị gị ọnụ mgbe ị jụrụ ya ajụjụ, lee ma ị̀ ga-esi ụzọ ọzọ gwa ya ihe ị chọrọ ịgwa ya. Dị ka ihe atụ, kama ịjụ nwa gị nwaanyị otú ụbọchị si gaa, gwa ya otú ụbọchị nke gị si gaa, ka i wee mara ma ọ̀ ga-etinye ọnụ. Ma, ọ bụkwanụ, ọ bụrụ na ị chọrọ ịmara ihe bụ echiche nwa gị n’ihe ụfọdụ, jụọ ya ajụjụ na-agbasaghị kpọmkwem ihe ị chọrọ ịmata. Jụọ ya ihe bụ echiche enyi ya n’ihe ahụ. Ọ bụrụ na ọ gwa gị, jụọ ya ndụmọdụ o nwere ike inye enyi ya ahụ.
Gị na ụmụ gị na-eto eto ikwurịta okwu nke ọma abụghị ihe ị na-agaghị emeli. Gbanwee otú gị na ha si ekwurịta okwu, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Jụọ ndị nne na nna ha na ụmụ ha na-ekwurịta okwu nke ọma otú o si agaziri ha. (Ilu 11:14) Mgbe gị na nwa gị na-ekwurịta okwu, bụrụ “onye na-anụ ihe ngwa ngwa, onye na-adịghị ekwu okwu ngwa ngwa, onye na-adịghị ewe iwe ngwa ngwa.” (Jems 1:19) Nke kacha nke, akwụsịla mbọ ị na-agba ịzụlite ụmụ gị na-eto eto “n’ọzụzụ na nduzi echiche nke si n’aka Jehova.”—Ndị Efesọs 6:4..
Olee ihe ndị gbanwerela ná ndụ nwa m kemgbe ọ ghọrọ okorobịa ma ọ bụ agbọghọbịa?
Olee ihe ndị m ga-eme ka otú mụ na nwa m si ekwurịta okwu dịkwuo mma?